Faha 40 taona – Hitohy any amin’ny faritra ny fampisehoan’ny Mahaleo - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Faha 40 taona – Hitohy any amin’ny faritra ny fampisehoan’ny Mahaleo
Taorian’ny fampirantiana tetsy amin’ny Chéminot Antanimena sy ny seho tany Antsirabe ary tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina, dia hitohy any amin’ny faritra ny fampisehoan’ny tarika Mahaleo ao anatin’ny fankalazana ny faha-40 taonany.
Tsy ho latsa-danja tamin’izay naseho teto an-drenivohitra ny hatolotra any amin’ny faritra. «Mbola holazaina manaraka eo ihany ireo daty sy faritra handalovan’ny tarika», araka ny fanazavan’ny Média Consulting, izay mpikarakara ny fankalazana.
Tsiahivina fa nandritra ny fampisehoana ny alatsinain’ny Paska teo no nanolorana ireo mpikambana ao amin’ny tarika Mahaleo ny mari-boninahitry ny «Commandeur de l丹rdre des Lettres, de Arts, de la Cultureｻ noho ny zava-bitan’ny tarika teo amin’ny tontolon’ny kanto. Faly Ran. 0 Fanehoan-kevitra	Lahatsoratra hafaMiverena @ pejy fandraisana
MOJO - ISORAKA-Hamarana ny seho 2013 i Sandrine Rajaofetra(0)
Ao anatin’ireo hetsika faran’ny taona. Hamarana ny sehon’ny Mojo, etsy Isoraka, amin’ity taona ity i Sandrine Rajaofetra, izay fantatra amin’ny feo mangany ao anatin’ny tontolon’ny Jazz. Anio alina manomboka amin’ny 10 ora ny fotoana hifanome-zany amin’ireo mpankafy mozika jazz. Ankoatra ny feo mangan’ i Sandrine, dia hanotrona azy amin’ny zava-maneno i Joël Rabesolo, efa tsy zoviana amin’ny fahai-zany mampiteny ny gitara sy Bim Andrianariseheno eo amin’ny ampongalava. Ireo mozika jazz efa mahazatra no entin’izy telo mianadahy amin’io alina io nefa kosa amin’ny endrika hafa araka ny iangalian’i Sandrine Rajaofetra azy. Ity farany izay mbola tanora erotrerony nefa efa manana sahady ny ho avy amin’ny tokotaniben’ny jazz. Manaporofo izany rahateo ny fiarahany amin’ireo efa sangany amin’ny seho izay ataony ka naharesy lahatra ireo mpankafy mozika. FR
KANTO AN-TSEHATRA-Hamelona tantara tena nisy i Ny Eja (0)
Mpanakanto fantatra teo amin’ny tontolon’ny asa soratra, kilalao ho an’ ny ankizy… Asehon’i Ny Eja amin’ny alalan’ny tantara an-tsehatra, hira ary dihy ireo sangan’asany. Seho hiarahan’ny kanto samihafa hotanterahina ny alahady 15 desambra izao etsy amin’ny Ivon-toeran’ny Kolontsaina Malagasy na ny IKM etsy Antsahavola, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. «Sambany aho no hiditra amin’ny filalaovana tantara an-tsehatra ary tena hiaina ilay tantara mihitsy», araka ny fanazavany. «Ny hampiavaka ny hetsika dia tantara tena nisy no hovelomina an-tsehatra», hoy ihany izy. Nomarihiny fa ny maro tamin’ireo hira nosoratany ka nampihirainy mpanakanto no niai-nany. Santionany nomeny tamin’izany ny «Tsaroany» sy ny «Fenonao» an’i Bodo, «Teny mamy» sy «Tampoka avy teo» an’i Tovo J’hay. «Nampifandraisina avokoa ny tantara ary narindra hisy mahatsikaiky, mampala-helo, mampisento, mampifaly ka fehezina amin’ny hoe: Mahafinaritra», hoy ihany izy. Ankoatra an’i Ny Eja, mpanakanto maro no nantsoiny sy nasainy hiaraka hiantsehatra aminy amin’ity hetsika ity, ka ahitana an’i Nathan sy Malalani-arainy eo amin’ny sehatry ny hira, ny Kaompania Dinirina kosa amin’ireo soradihy. Hanampy amin’ ireo fiantsana ny tononkalo kosa ry Iriana mpisorona, Riambola Mitra, Ony Mihajanirina ary Nofy. FR
MANDALO AN-TANINDRAZANA-Hanolotra seho takariva tokana i Lôlô sy ny tariny(0)
Efa eto an-toerana hatramin’ny alatsinainy teo. Hano-lotra seho takariva tokana ho an’ireo mpankafy azy ry Lôlô sy ny tariny amin’ ny fandalovan’i Lôlô eto an-tanindrazana. Etsy amin’ny Paprika Ankorondrano no hanomezany fotoana ireo mpankafy azy, ny zoma manomboka amin’ny 9 ora alina. Hanotrona an’i Lôlô amin’io fampisehoana io ireo mpikambana eto an-toerana ahitana an-dry Benny sy Bebey ary Sammy. «Hisy ny mpitendry roa hanampy anay amin’io andro io», raha ny fanazavana nentin’i Lôlô. Hitondra ny talentany ihany koa i Farah, andriambavilanitra mpanakanto izay mpiara-dia amin’i Lôlô amin’ireo hetsika ataony any andafin’ ny riaka any. Izy, araka izany, no hiantsoroka ny feom-behivavy amin’ireo hiran’ ny tarika Lôlô sy ny tariny. Ankoatra ireo hira efa nahafantarana ny tarika hatramin’izay, dia hitondra hira vaovao vitsivitsy i Lôlô amin’izao fandalovany izao. «Sarotiny ary tsy mahafoy ireo hira taloha ny mpankafy, indrindra amin’ny fampisehoana, ka izay no nahatonga anay hanolotra izany amin’ity seho takariva ity», hoy ihany izy. Noho ry Lôlô sy ny tariny tsy mbola nanana rakikira sy rakitsary mihitsy,dia tafi-ditra ao anatin’ny fikasan’ ny tarika ny hiara-hiasa amin’ny mpamokatra eto an-toerana amin’ny famo-karana izany. «Tsy resaka ara-barotra eto no tanjona fa ny mba hametrahana rakitra fotsiny ihany noho ny zava-misy hiaraha-mahalala», hoy ihany i Lôlô. FR
HIRA FIDERANA-Hitondra an-tsehatra ny «Dinam-pihavanana» i Tendry Tao anatin’ilay fifaninanana «Tena tia» nokarakarain’ny MBS tamin’ny fotoan’androny no nahafantarana kokoa an’i Tendry. Miaina ao anatin’ny tontolon’ny hira fiderana izy ankehitriny ka hamoaka ny rakitsary voalohany. Ho fampahafantarana izany dia hiaka-tsehatra etsy amin’ny Carlton Anosy i Tendry ny sabotsy 14 desambra izao, miaraka amin’ny «Dinam-pihavanana». Ho hafa kely ny hitondrany ny seho satria hitondra
FAMPIRANTIANA-Lohahevitra roa no asehon’ny «Inona no hatao ho anao» Nanomboka ny 06 desambra teo etsy amin’ny Is’art Galerie. Lohahevitra roa no asehon’ny fampirantiana «Bonjour, vous désiriez» na «inona no hatao ho anao» ka ahitana ny sanganasan’ilay mpanakanto eo amin’ny hairaha araka endrika amam-bika, Loïc Damade. Ny lohahevitra voalohany amin’izany dia ny fahitana olona manao hadalana na hadisoana ka tratra eo am-panaovana izany nefa tsy
Mahaleo, zavakanto, Mpanoratra admin, 11.04.2012, 10:05	FIARAHAMONINA
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	KICKBOXING – «GALA DE BOXE PIEDS-POINGS»-Hisolo tena antsika any La Réunion ny Fihezama
BAOLINA KITRA – «SUPERCOUPE 2013»-Hanala vela amin’ny Cnaps Sport ny AS Saint-Michel etsy Mahamasina
FANJIFANA BISKY-Afaka hanjifa ny Oréo ny sokajin’olona rehetra
FAMPIDIRAM-BOLAM-PANJAKANA-Ny 89%ihany no tratra amin’ ny hetra tokony ho voaangona
RAHARAHA «BCMM»-Miandry fahafahana vonjimaila ireo mpiasa nogadraina